मीनाको मायामा फसे अभिनेता राजेश
काठमाडौं, जेठ २ –चलचित्र करियर ओरालो लाग्दै गएपछि अभिनेता –अभिनेत्री म्युजिक भिडियो मोडलिङमा उत्रिनु सामान्य जस्तै भएको छ । यस्तैमा एक समयका बिकाउ अभिनेता राजेश हमाललाई पनि अचेल म्युजिक भिडियो अभिनयमा फाट्ट फुट्ट देखिन सकिन्छ । अभिनेता राजेशको मोडलिङ रहेको नयाँ गीत ‘मायाले हो’ बोलको भिडियोमा अहिले सार्वजनिक भएको छ । गीतमा अभिनेत..
ए गुरुङ र मेनुकाले तताउलान् त ‘हिटलर’ ?
काठमाडौं, जेठ २ – पछिल्लो समय चलचित्र स्टारले भन्दा पनि कथाबस्तुले चलेको अवस्था ..
‘कालो पोथी’ फेसबुकबाट पाइरेसी
काठमाडौं, जेठ २ – बिदेशका बिभिन्न महोत्सवमा चर्चा र पुरस्कार पाउन सफल चलचित्र ‘क..
चलचित्र संघको इटहरीमा शाखा र भवन एकै पटक
काठमाडौं, जेठ २ –चलचित्र प्रदर्शक र बितरकहरुको साझा संगठन ‘नेपाल चलचित्र संघ’को ..
बाल्टिमोरमा माल्भिकाले मिस्टर एण्ड मिस नेपाल छान्ने
काठमाडौं, जेठ २ – अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यको बाल्टिमोरमा ‘मिस्टर एण्ड मिस एएन..
अबको डि सिने अवार्ड हेटौडामा
काठमाडौं, जेठ २ – विगत नौं बर्षयता नियमित रुपमा आयोजना हुँदै आएको डि सिने अवार्ड यसबर्ष पनि मोफसलमा आयोजना हुने भएको छ । सात बर्ष लगातार काठमाडौंमा आयोजना भएको अवार्ड यसपटक हेटौडामा गर्न लागिएको हो । डिजिटल फर्म्याटमा बनेका फिल्मलाई लक्षित गर्दै आयोजना हुँदै आएको अवार्ड गतबर्ष पोखरामा आयोजना भएको थियो । अवार्डमा सहभागी फिल्मको [..
मनिषा कोइराला र कपिल शर्मा शोकी सुमोनाबिच यस्तो सम्बन्ध ?
जेठ १ – कपिल शर्मा शो भारतको एक सेलिब्रिटी टक शो हो जहाँ सेलिब्रिटी आफ्ना फिल्मको प्रोमोसनका साथै मनोरञ्जनका लागि उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छन् । यसै क्रममा, क्यान्सरलाई जितेपछि बलिउडमा फर्किएकी मनिषा कोइराला आफ्नो नयाँ फिल्म ‘डियर माया’ को प्रोमोसनका लागि कार्यक्रममा उपस्थित भइन् । उक्त कार्यक्रममा मनिषाले आफ्नो निकै पुरानो..
‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ बोल्ड साम्राज्ञी
काठमाडौं, जेठ १ – ‘ड्रिम्स्’ अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह चलचित्र ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ पनि देखिने भएकी छन् । कोरियोग्राफर रेनेशा वान्तवा राईको निर्देशनमा बन्ने यो चलचित्रमा उनी अभिनेत्रीको रुपमा देखिन लागेकी हुन् । चलचित्रमा उनी बोल्ड अवतारमा देखिने बताइएको छ । केही दिन पहिले राजधानीमा घोषाण गरिएको चलचित्रमा शाहको अपो..
जेठमा चलचित्रको ताँती : ‘डायरी’ देखि ‘पर्वसम्म’
काठमाडौं, जेठ १ – स्थानिय निर्वाचन, बलिउडको बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘बाहुबली’को प्रभाव लगायतका बिभिन्न कारणले गत बैशाख महिनामा नेपाली चलचित्र खुलेर रिलिजमा आउन सकेनन् । बैशाखको तेस्रो साता रिलिज ‘ब्ल्याक डायरी’ बाहेकको चलचित्र यो महिना रिलिज भएन भन्न फरक पर्दैन । तर जेठ महिनामा भने रिलिजको लागि पहिलो साता देखि अन्तिम साता ताती नै ..
यी पाँच फिल्मभन्दा निकै पछाडि छ बाहुबलीः १८ गुणाभन्दा धेरै कमाउने यो फिल्म
जेठ १ – बाहुबली भारतमा सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने फिल्मको सूचीमा शीर्ष स्थानमा परेको छ तर यसले संसारको रेकर्ड भने तोडेको होइन । बाहुबली हलिउडका यी फिल्मबाट अहिले पनि निकै टाढा छ र उनीहरुसँगको टक्करमा निकै पछाडि छ । १. बाहुबली टुः बाहुबली टु ले विश्वव्यापी रुपमा १२ सय करोड भारुको व्यापारा गरेको छ । […]
बोकेदाह्रीको टुप्पीमा अभिनेत्री सारिका
काठमाडौं, जेठ १– कमेडियन गायक श्रीकृष्ण लुईंटेल ‘बोकेदाह्री’ले ‘टुप्पी’को विषयमा लेखेको गीतको म्युजिक भिडियो निर्माण भएको छ । भिडियोमा कलाकार घनश्याम तिमिल्सिना ‘एण्टिना’ र अभिनेत्री सारिका घिमिरेले अभिनय गरेका छन् । भिडियो हालै राजधानीका बिभिन्न स्थानमा छायाँकन गरिएको हो । भिडियोमा सारिका र घनश्यामले अन स्क्रिन रोमान्स गरेका छन..
जापानमा ‘सायद २’ हेर्न दर्शकको भिड
काठमाडौं, जेठ १ –३० असार प्रदर्शन मिति तय भएको चलचित्र ‘सायद २’को जापान प्रिमिएर भब्य भएको छ । आइतबार जापानको राजधानी टोकियो स्थित नाकानो जिरो हलमा आयोजित प्रिमिएरमा दर्शकले राम्रै साथ दिएका थिए । निर्माता सुनिल रावल, नायक सुशील श्रेष्ठ, पत्रकार श्याम अर्याल र सचित खड्का लगायत प्रिमिएरका लागि नेपालबाट सहभागी थिए । नेपाली दुतावास..
सम्बन्धविच्छेदपछि मलाइकाले मागिन् १० करोड, अरबाजको यस्तो जवाफ
एजेन्सी मुम्बई, वैशाख ३१ – मलाइका अरोडा र अरबाज खानबीच गत मे ११ मा आधिकारिकरुपमा डिभोर्स भएको छ । मालइकाले अरबाज खानसँग एलुमनी अमाउन्ट बापत १० करोड भारतीय रुपैयाँ माग गरेकी छिन् । भारतीय मिडियाको रिपोर्टका अनुसार मलाइका उक्त रकमभन्दा कममा सम्झौता गर्न तयार छैनन् । यता, अरबाजले भने मलाइकालाई आफू १५ करोड भारु दिन […]
भोट हाल्न नपाएपछि श्रीमानप्रति करिष्मा मानन्धरको यस्तो आक्रोश !
काठमाडौं, वैशाख ३१ – स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भोट हाल्न नपाएपछि अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरले आफ्नै श्रीमानप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन् । राजधानीको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम नभएका कारण मतदान गर्न नपाएको रिस पति विनोद मानन्धर सँग पोख्दै उनले भनेकी छिन्, ‘आज मेरो मालिक बन्ने तानाशाहीको हदले गर्दा मेरो मनले सहन् मानेन, विनोद ।’ ..
समुन्द्री तटमा बिकिनीमा देखिएकी प्रियंका चोपडाको ग्ल्यामरस अवतार (फोटोफिचर)
एजेन्सी बैशाख ३० – प्रियंका चोपडाका केही फोटो सोसल मिडियामा सेयर गरिएको छ । यसमा उनी कालो बिकिनीमा देखिएकी छिन् । फोटो त्यतिबेला खिचियो जब प्रियंका शुक्रबार आफ्नी साथी एड्रियाना लीमा (ब्राजिलकी सुपरमोडल) सँग साउथ मायामीको समुन्द्री तटमा क्वालिटी टाइम बिताइरहेकी थिइन् । बेस्ट अफ प्रियंका नामको ट्वीटर ह्यान्डलमार्फत यी फोटोहरु सार..
बाहुबलीको इफेक्टको कमालः शिवगामी देवीको हातमा बच्चा होइन बोतल थियो
बीबीसी बैशाख ३० – भारतीय सिनेमाका थुप्रै रेकर्ड बनाउने फ्यान्टेसी ड्रामा फिल्म ‘बाहुबली–टु’, आफ्नो स्पेशल इफेक्टका कारण निकै चर्चामा छ । ठूल्ठूला झरना, पानीमा डुबेकी शिवगामी देवीको हातमा बच्चा वा प्रभास र तमन्नाको निकै उत्कृष्ट वातावरणका बिचको रोमान्स । बाहुबलीको पहिलो संस्करणले यी सबै सट्समार्फत मानिसहरुको दिल जित्यो भने बाहुबल..
सन्नी लियोन स्वेच्छाले पोर्न इन्डष्ट्रिमा आएकी थिइन्, रिसाएका आमा–बुवालाई दिएकी थिइन् यस्तो जवाफ
एजेन्सी बैशाख ३० – सन्नी लियोन ३५ वर्ष पुगेकी छिन् । उनी अब बलिउडकी चर्चित नायिकामध्येकी एक हुन् । यद्यपी, एक अन्तर्वार्तामा उनी आफैंले स्विकारेकी छिन् कि पोर्न स्टारको ट्यागले जिन्दगीभर उनलाई पछ्याइरहन्छ । हुन त सन्नीको पछिल्लो जीवनबारे कुरा गर्नुपर्दा उनी कुनैबेला एक साधारण युवती थिइन् । उनले पोर्न इन्डस्ट्रिमा आउने निर्णय आफ..
जस्टिन बीबरसँग किन माफी मगाउन चाहन्छन् भारतीय ?
बैशाख ३० – क्यानाडेली पपस्टार जस्टिन बीबरको विषयमा भारतमा निकै चर्चा थियो । उनी कन्सर्टका लागि पहिलो पटक भारत गएका थिए । उनी भारतमा नआउन्जेल मिडियाहरुले उनीसँग सम्बन्धित विभिन्न चर्चा परिचर्चा गरिरहे । उनका सकारात्मक कुराहरु धेरैजसो सार्वजनिक भए तर उनी भारतबाट निस्किएलगत्तै उनका नकारात्मक कुराहरु धेरै बाहिरिनि थाले । उनीसँग दर्श..
पूर्वमिस नेपाल इभानाले कसिन् लगनगाँठो
काठमाडौं, बैशाख २९ – मिस नेपाल २०१५ की बिजेता इभाना मानन्धर विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन् । उनले प्रगुण राजभण्डारीसँग लगनगाँठो कसेकी हुन् । राजभण्डारीसँगको प्रेमलाई उनले बैबाहिक सम्बन्धमा परिणत गरेकी हुन् । गुपचुप बिबाह गरेकी उनले विहिवार काठमाडौंको लाजिम्पाटमा स्थित होटल र्याडिसनमा विवाह पार्टी भने भव्य दिएकी थिइन् । पार्टीमा मिस ..
जापानका नेपाली माझ ‘सायद २’
जापान ,बैशाख २९ –चलचित्र ‘सायद २’ १४ मे अर्थात आइतबार जापानमा बिषेश प्रदर्शन हुने भएको छ । जापानको टोकियोमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा चलचित्र युनिटले बिशेष प्रदर्शन र चलचित्रको बिषयमा बिभिन्न जानकारी दियो । बिषेश प्रदर्शनका लागि नेपालबाट निर्माता सुनिल रावल, प्रस्तुतकर्ता दुर्गिश थापा, अभिनेता सुशील श्रेष्ठ, पत्रकार श्याम अर्याल ..
जब विवाहित सञ्जय माधुरीको प्रेममा परे
एजेन्सी मुम्बई, वैशाख २९ – सञ्जय दत्तको जीवनमा आधारित रहेर बनिरहेको राजकुमार हिरानीको चलचित्रमा उनको जीवनबारे धेरै उतार चढाव देख्न पाइनेछ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार माधुरी दिक्षित सञ्जय दत्तलाई फोन गरेर आफ्नो जीवनीमा आफ्नो बारे नदेखाउन आग्रह गरेका छन् । यद्यपि, यसबारे माधुरीले खण्डन समेत गर्दै आफूलाई यसबारे केही थाहा नभएको ..
अर्जुन कपुरसँगको सम्बन्धबारे मलाइकाको यस्तो जवाफ
एजेन्सी मुम्बई, वैशाख २९ – वलिउड अभिनेता अर्जुन कपुसँग सम्बन्ध रहेको विषयमा भइरहेको हल्लाबाट मलाइका अरोराले आफू वाक्क भएको बताएकी छिन् । हालै मात्र एक कार्यक्रममा पत्रकारले उनलाई यसै बारेमा प्रश्न सोध्दा क्रुद्ध बनेकी थिइन् । उनले पत्रकारलाई हल्ला फैलाउनुभन्दा आफू आएको कार्यक्रमबारे प्रश्न गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । भारतीय सञ्चार ..
पुरानो कथा ‘पञ्जायत’लाई सेन्सरको अंकुश
काठमाडौं, बैशाख १९ –२०३१ सालको कथामा निर्माण भएको चलचित्र ‘पंचायत’ निर्माण पुरा भएको छ । चलचित्रले तत्कालिन अबस्थामा स्कुलमा गाईने राष्ट्रिय गानलाई समेत प्रयोग गरिएको छ । केही दिन अगाडि चलचित्रले केन्द्रिय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)बाट पिजी सर्टिफिकेट पाएको छ । सेन्सर बोर्डले चलचित्रलाई पिजी सर्टिफिकेट दिएकोमा लेखक तथा नि..
‘बाहुवली’ प्रभासले अब एउटा चलचित्रको ५० करोड लिने, तर खानहरुभन्दा धेरै पछि
मूम्बई, वैशाख २९ – बाहुबलीको दोस्रो संस्करणको अपरा सफलता पछि चलचित्रका निर्माताहरुको बैंक ब्यालेन्समा सयौँ करोड थपिएको छ । तर, यस चलचित्रबाट फाइदा लिने उनीहरुमात्र एक्लो होइनन् । चलचत्रिका सदस्य तथा कलाकारहरुले आगामी चलचित्रको लागि आफ्नो पारिश्रमिकमा बृद्धि गरेका छन् । गत अप्रिल २८ मा रिलिज भएको चलचित्रले विश्वभर १ हजार करोडभन्द..
सुनिता दुलाललाई १० प्रश्नः प्रेमपत्रदेखि फ्यानसँग डेटसम्म
व्यस्त गायिकाको सूची बनाउने हो भने गायिका सुनिता दुलालको नाम पनि अग्रपङ्क्तिमा आउँछ । कार्यक्रमका लागि विदेश गइरहने गायिका हुन् उनी । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, गुगलप्लस र युट्यबमा पनि उनी अपडेट रहन्छिन् । सामाजिक सञ्जालमध्ये फेसबुकबाट उनलाई विवाहको प्रस्ताव धेरै आउँने गरेका छन् । त्यसरी आएको प्रस्तावको वास्ता गर्दिनन् उनी ।..